मृत्यु ः अस्ति, हिजो र आज / आन्विका गिरी | Online Sahitya
को रोएको होला यति बिहानै भनेर मलाई झर्को लाग्यो । मेरी आमा पो चार बजे उठ्नुहुन्थ्यो, मेरो त उठ्नेबेला भएको थिएन नि । मैले जोड गरेर आँखा चिम्लन प्रयास गरें तर सकिनँ । रुवाइ धेरै परबाट होइन, मेरै आँगनबाट आएको थाहा पाउन मलाई बेर लागेन । मान्छेहरूको कल्याङमल्याङ पनि बढ्दै गएको थियो । मैले झ्याल उघारे । पूरै गाउँ उल्टेर आँगन भरिएको थियो । कोही 'बिचरा', कोही 'च्वच्व' त कोही 'पापीहरू' भन्दै थिए । सबै एकैचोटि बोलिरहेकाले होला मैले प्रस्ट केही बुझ्न सकिनँ । सबको बीचमा घेरिएर रोइरहेकी आइमाई झन् जोडले झन् जोडले रुन थालेपछि म दौडिएर तल झरें । म तल झर्दा अर्को टोलका बूढाकाका हातमा लालटिन लिएर आउँदै थिएँ । म भीड चिरेर त्यो रोइरहेकी आइमाईलाई हेर्न छिरें । कस्तो बुद्धु थिएँ म त्यतिबेला, आफ्नै आमा रोएको पनि मेसो पाएको थिइनँ । बूढाकाकाको लालटिनको उज्यालोमा मैले आमाको आँसुले भिजेको अनुहार देखें । भीडमा हाफ भेस्ट मात्र लगाएर जाडोले काम्दै गरेको मलाई देखेर आमाले गम्लंग अँगालो हाल्नुभो, 'पापीहरूले बुवालाई मारे ।'
एकैछिनमा सबैजना बूढाकाकाको लालटिनको पछि लागेर नजिकैको नहरमा गए । म पनि आँखा मिच्दै छिमेकी साइँली ठूलीआमाको सारीको फेर समातेर बाटो लागे । अझै उज्यालो भएको छैन । चिसोले जीउ झन्-झन् काम्दै छ । परैबाट बूढाकाकाले लालटिन उचालेर भने, 'ऊ त्यहाँ झुन्डिएका रहेछन् ।'
नहरछेउको बाटोमा एउटा कटहरको रूख थियो । बाटोमा पर्ने त्यो कटहरको रूखमा एउटा लास झुन्डिएको थियो । लालटिन नजिक पुगेपछि मात्र मैले बाको कालो चप्पल चिनें । अनि चप्पलभन्दा माथिको खैरो सुरुवाल, सुरुवालभन्दा माथिको खैरो कमेज लगाउने मेरा बा नै थिए । त्यो रातो गलबन्दी पनि बाकै थियो जुन मैले मलाई ठूलो भएपछि दिन भनेको थिएँ । बाको टाउको तल जमिनतिर झुन्डिएको थियो । आँखाहरू खुला थिए । मैले एकोहोरो बातिर हेरिरहें । साइँली काकीले 'केटाकेटी मान्छेले हेर्नु हुन्न' भनेर आफ्नो सारीको सप्कोले मेरो टाउको छोपिन् ।
लासको छेउमा पुगेपछि आमा झन् कहाली कहाली रुन थाल्नुभयो । उहाँ झन्डै बुवाको खुट्टा समाउन पुग्नुभएको थियो, आइमाईको हूलले रोक्यो । कसैले भीडबाटै भन्यो, 'प्रहरीलाई खबर नगरेसम्म लास नझार्नू !'
हुस्सु बिस्तारै फाट्दै गइरहेको थियो । मान्छेहरूको भीड बढ्दै गइरहेको थियो । हाम्रा आफन्तहरू पनि ओइरिन थालेका थिए । मानिसहरू दुई मतमा बाझिएका थिए । कोही बा आफैं झुन्डिएको भन्दै थिए कोही भने बालाई कसैले मारेर झुन्डाइदिएको भन्दै थिए । आमाचाहिँ एकोहोरो 'पापीहरूले मारे मेरो प्राणलाई' भन्दै रोइरहनुभएको थियो । म अलमलमा थिएँ । आमाले पटक पटक जिब्रो टोकेर मरेको नाटक गरेर मलाई सताइरहनुहुन्थ्यो । मलाई लाग्यो, बाले पूरै गाउँलेलाई सताउनुभएको हो । यी सब मान्छे कति जिल्लिन्छन् होला जब बा डोरी खोलेर तल झर्नुहोला भन्ने मलाई लागिरहेको थियो । तर उभिँदा उभिँदा खुट्टा गलिसक्दा पनि बा तल झर्नुभएन । आमा रोइराख्नुभएको थियो । मलाई झर्को लाग्दै गइरहेको थियो ।
'आमा बुवालाई रूखबाट तल र्झन भन्नु न,' मैले आमाको आँसु पुछिदिँदै भने, 'मलाई स्कुल जान ढिला हुन्छ ।'
'तेरा बा आफैं मरेका होइनन्, उनलाई पापीहरूले मारेका हुन् । हेर यहाँ लेखेको छ रे, तेरो बाको हत्या भएको, उनी झुन्डिएका होइनन्,' आमाले सेतो कागजमा एक ठाउँमा औंला नचाउँदै भन्नु भो । कक्षा १ मा भर्ना भएर पनि स्कुल नगएको म नेपालीमा लेखेको हो कि अंग्रेजीमा त छुट्याउन सक्दिनथें, कसरी हत्या लेखेको छ कि आत्महत्या थाहा पाउँथें ? फेरि हत्या र आत्महत्या भनेकै थाहा थिएन ।
'आमा पापीहरू भनेको को हुन् ?' तैपनि मैले अक्षरहरू पढ्ने प्रयास गर्दै भनें ।
झोंकी खालका मेरा बाका शत्रुहरूको सूची लामो थियो । सानो-सानो कुरामा पनि निहुँ खोज्ने मेरा बा झुन्डिएको मान्न उनका शत्रुहरू त तयार थिएनन् झन् आमा त के मान्नुहुन्थ्यो । म सुतेपछि आमालाई एकैछिनमा आउँछु भनेर जानुभएका बा आउनुभएन । आमाले शंका गरेका मान्छेहरूको आफ्नै एउटा सूची बनाउनुभएको थियो । त्यो सूचीमा परेका मान्छेहरूसँग हामीले बोलचाल बन्द गर्‍यौं । बा मरेपछि प्रहरी कार्यालय जानु आमाको एउटा नियमित काम थियो । किरिया सकिएपछि पनि टाढाटाढाबाट घरमा मान्छेहरू आइराखे । घरमा आउने हरेक मान्छेले मात्र होइन, स्कुलमा साथीहरू, गाउँमा गाउँलेहरूले, पाहुना जाँदा आफन्तहरूले बाको हत्याको धेरै कहानीहरू सुनाए । प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेर फाइल बन्द गरिसक्दा पनि बाको हत्या खुल्लै थियो । सात वर्षपछि म मामाघर जाँदा पनि कसैले 'ज्वाइँको हत्यारा पत्ता लाग्यो त ?' भनेर मामालाई सोधेका थिए ।
मान्छेहरू चियापसलमा भन्थे, 'बहुदलमा पनि प्रहरीले हत्यारा पक्रन सकेन । खोइ कानुन ?'
रेशम बेपत्ता थियो एक महिनादेखि । उसको पत्तो लाग्दा रेडियोले उसको ठेगानासहित उसको मृत्युको खबर सुनायो । वास्तवमा रेडियोले आतंककारी रेशमको मृत्यु मुठभेडमा भएको सुनाएको थियो । पछिल्लो समय यसरी नै मान्छेहरू कि त आतंककारी हुन्थे, कि दुश्मन हुन्थे । मान्छेहरूको वर्गीकरण साँघुरिएको थियो । म र आमा आँगनमा धान दाउनी गर्न मियो गाड्दै थियौं । रेडियोले उसको नाम भनेपछि आमाले मतिर हेर्नु भो । मैले आमातिर हेरंे । आमाले मलाई आँगनबाट तान्दै भित्र ल्याउनुभयो र ढोका थुनेर भन्नु भो, 'रेशमको बारेमा कसैसँग केही कुरा नगर्नू,' आमाले मेरो हात आफ्नो टाउकोमा राख्नुभयो, 'तैंले केही कुरा गरिस् भने म मर्छु ।'
'कवि तेरो बुवाको हत्या सामान्य विवादमा भएको हो,' मैले भनंे, 'सहिद भनेको त देशको लागि लड्दालड्दै मर्ने मान्छे होइन र ?'
'हो,' उसले भन्यो, 'तर तँलाई थाहा छ बिर्खे काका कुन पार्टीका थिए ?'
'मेरा बा पार्टीका लागि मारिए । बा जिल्ला किसान संगठनमा उठ्ने सोच्दै थिए, त्यसैले उनको हत्या भयो । बिर्खे काका अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्थे,' उसले विस्तार लायो, 'यो देशमा भीड जम्मा नगरी केही हुन्न । तँ मेरो साथी यतिखेर काम नलागे कहिले लाग्लास् ।'
'राजनीतिक प्रतिशोध लिएर मेरो बुवाको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गराइयो,' उसले जोसिएर भन्यो, 'राज्यले असली हत्यारालाई कठघरामा ल्याओस् र मेरो बुवालाई सहिद घोषणा गरोस् भन्ने मेरो माग हो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी छ ।'
फोन त मलाई पनि आयो राष्ट्रिय स्तरबाटै । कार्यालयबाट हाकिमले भोलिपल्ट आगो भएर फोन गरे, 'तपाईको जरुरी काम त बन्द गर्ने पो रहेछ हैन ?' पत्रिकामा मेरो फोटो कविरामसँग कानेखुसी गर्दैगर्दाको छापिएको रहेछ । कविरामसँग मैले थुप्रैचोटि बन्द खुलाउन सल्लाह गर्न कानेखुसी गरेको थिएँ । हाकिमलाई सम्झाउन सकिनँ । उनले पनि उही कविरामले झैं उर्दी गरे, 'भोलि बिहान हाजिर हुन आउनुस्, जागिरको माया भए !'
'मेरो जागिरको सवाल छ,' मैले रुँलाझंै गरें ।
'कति कमाउँछस् ?' उसले मेरो कानमा सोध्यो ।
'आन्दोलनको टुंगो लाग्न दे,' उसले फेरि कानमै भन्यो, 'केही व्यापार नै गर्लास्, एकमुष्ट पैसा आउँछ ।'
'कहाँ जान लागेको ?' उसले थाहा नभएझैं गरी सोध्यो ।
'भोलि घोषणा कार्यक्रम छ,' उसले सुनायो, 'हाम्रो पैसा छिट्टै आउँछ, लिएर मात्र जा !'
भोलिपल्ट कार्यक्रम भो । नयाँ सर्ट नयाँ पाइन्ट लगाएर कविराम मञ्चमा थियो । उसको छेउमा प्रमुख अतिथिको रूपमा विपक्षी दलका राष्ट्रिय स्तरका नेता थिए । मञ्चको अघिल्तिर कविरामका बाको ठूलो फोटो राखिएको थियो । केन्द्रबाटै नेता झरेकाले मान्छे भरिभराउ थिए । कार्यक्रमको सुरुवात शोकसभाबाट भयो । अनि एकएक वक्ताले कविरामको बुवाको हरिरामका बारेमा बोले । प्रमुख अतिथिले पनि हरिरामको योगदानको लर्को लगाए । उनी पटकपटक कविरामतिर फर्केर बुवाको नाउँ के रे भन्दै सोधेपछि भन्थे, 'हरिरामजीको योगदान लामो छ,' कविराम आफैंले पनि उसको बाउले पार्टी, देश, जनता, गाउँका नाममा गरेको योगदानको चर्चा गर्‍यो । बोलिसकेपछि उसले बाको फोटोतिर हेरेर कुप्री परेर नमस्कार गर्‍यो ।
कार्यक्रम सकिएपछि म कुनामा उभिइरहेको थिएँ । प्रमुख अतिथि 'हजुर-हजुर' भन्दै फोनमा कुरा गर्दै गए ।
'अब सत्तारुढ दललाई गिराउने योभन्दा राम्रो इस्यू के हुन सक्थ्यो र,' उनले फोनमा भने, 'यतिखेर एजेन्डाको खडेरी परेको तपाईंलाई थाहा छैन र ?'
'मान्छे त यो हाम्रो पार्टीको होइन, तर हामीलाई फाइदा भयो कि भएन !' अनि उनी हाँसे ।
'भाउजू, यो मरेपछि २० लाख पाउनुहुन्छ,' मैले उसकी स्वास्नीलाई सोधें, 'मारिदिउँ ?'
'बीस लाख ?' उसकी स्वास्नीले मुख आँ पारी ।
'हो बीस लाख,' मैले भनें, 'भन्नुस् के गरौं ?'
'मारिदिनुस्,' स्वास्नी त्यति भनेर हिँडी ।
'भोलि तँ र म यसरी नै मारिन्छौं,' यति भनेर म काठमाडौं आएको छु ।